musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Brazil Kupwanya Nhau » Brazil Inofara neMisangano kuEexpo Dubai 2020
Airlines • avhiyesheni • Brazil Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • UAE Kuputsa Nhau
Mutungamiri weEmbratur (Brazilian Agency for the International Promotion of Tourism), Carlos Brito, uye Gurukota rezveKushanya, Gilson Machado Neto, vakagamuchirwa neMukuru weEmirates Airlines, Sheikh Ahmed bin Seed Al Maktoum musi waGumiguru 3, 2021. The Chinangwa chemusangano, chakaitwa panguva yeExppo Dubai 2020 zviitiko, chaive chekuwedzera kubatana kwendege kuenda kuBrazil kubva kuDubai uye mamwe mahumbs eEmirates, achitarisa kuAmazon neNortheast yeBrazil.
Kune parizvino nendege zana negumi kutenderera pasirese kubva kuSão Paulo yakapihwa neEmirates.
Imwezve ndege dzeEmirates dzasvika muBrazil, Brazil ichatanga mishandirapamwe yekushambadzira kusimudzira nzvimbo dzeBrazil muUAE uye mamwe makuru makuru epasi rose.
Expo Dubai 2020 ine kutora chikamu kwenyika zana nemakumi mashanu uye vateereri vanofungidzirwa vevanhu vangangoita mamirioni makumi maviri nemashanu kwenguva yakareba yechiitiko.
Kubva kuSão Paulo, Emirates parizvino inopa 110 dzendege kutenderera pasirese. “Avo vakatowana mukana wekupinda muendege yeEmirates vanogona kusimbisa kushinga kwavanobata navo vafambi, nendege dzemazuvano nemasevhisi anoita kuti ruzivo rwekubhururuka runakidze. Kana iyo kambani yatanga kupa kwakawanda nzvimbo dzekuBrazil, isu tine chokwadi chekuti kudiwa kuchave kwakakwirira. Izvi zvichawedzera huwandu hwevashanyi vekunze vanosvika munyika medu, ”vakadaro Gurukota Gurukota Machado Neto.
Mutungamiri we Embratur uye Gurukota rezveKushanya rakaratidza kuna Sheikh Ahmed bin Mbeu Al Maktoum kuti dzimwe ndege dzeEmirates dzasvika zvakare kuBrazil, Brazil ichatanga mishandirapamwe yekushambadzira yekusimudzira nzvimbo dzeBrazil muUnited Arab Emirates nedzimwe nzvimbo huru dzepasi rose. "Kuisa mari kwedu kwekuisa zvigadzirwa zveBrazil nenzvimbo dzichaendeswa kunzira dzekuvaka hukama nekutengeserana kwemuno, sekudzidzisa, tafura dzebhizinesi, famtours, kuwedzera kune zviito neruzhinji rwekupedzisira," akatsanangura Gurukota.
Pakusimudzirwa kweBrazil Pavilion kuEexpo Dubai 2020, Mutungamiri weEmbratur, Carlos Brito, akataura kukosha kwekutora chikamu kweBrazil muzviitiko zvakaita seExpo Dubai. “Kukwidziridzwa kwenyika yedu kunze kwenyika kwakatonyanya kukosha muchiitiko ichi chekuwedzera majekiseni ekudzivirira uye kutangazve kufamba. Pasi rose rinoda uye rinofanirwa kuziva kushanya kwedu, ”vakadaro. Pakati pezviitiko zvakarongwa naEmbratur uye neHurumende Yezvekushanya kune irikugamuchira vashanyi, zviitiko zvetsika, kuratidzira nemifananidzo uye mabasa emaoko, mumhanzi nekutamba zvakajairika kumatunhu ese eBrazil. Uye zvakare, Embratur iri kurongawo zviitiko zvechiitiko chechigadzirwa kuti zviwedzere kudyidzana nevashanyi uye zvichagovera zvigadzirwa zvekushambadzira.
Mutungamiri weEmbratur Carlos Brito
Mutungamiri weEratratur uye Gurukota rezveKushanya vakarongawo misangano nevamiriri venyika dzese panguva yeEppo, kusanganisira kubvunzana naVice-Prime Minister uye Gurukota reSlovenia's Economic Development uye Technology, Zdravko Počivalšek, uye San Marino Tourism Secretary Frederico Amati. Chibvumirano chemubatanidzwa pakati peBrazil neSlovenia chinofanirwa kusainwa panguva yekutora chikamu kwaEmmratur uye neHurumende Yezvekushanya mu "Svondo reBrazil," rakaitwa pakati paNovember 9 kusvika 15, kuExpo Dubai 2020.
Tourism yeBrazil inomiririrwa nezviito zveEmbratur (Brazilian Agency yeInternational Promotion of Tourism) kuExppo Dubai 2020. Pane zviitiko zviviri, iyo Agency iri kutora zvinowanzoitika kuBrazil kuUnited Arab Emirates: pakuvhura, pakati paGumiguru na1. , uye panguva yeBrazil Vhiki, kubva munaNovember 9-9. Yakachengetwa makore mashanu ega ega uye ichifunga seimwe yezviitiko zvakakosha kwazvo pasirese, iyo World Expos ine kukosha kukuru kwekuratidzwa kwenyika. Ivo vanonyanya kutarisana nehunyanzvi uye bhizinesi chizvarwa. Yakamisikidzwa kubva gore rapfuura nekuda kwedenda re COVID-15, Expo Dubai 2020, iyo yakamisikidzwa nekuda kwe COVID-19 uye iri kubatwa kubva muna Gumiguru 1, 2021 kusvika Kurume 31, 2022, ine kutora chikamu kwenyika zana nemakumi mashanu nevateereri vanofungidzirwa vevanhu vangangosvika mamirioni makumi maviri nemashanu pamwedzi mitanhatu yechiitiko.